Medical Writings: ARV မျောက်ကိုက်၍ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးထိုးရခြင်း
ARV မျောက်ကိုက်၍ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးထိုးရခြင်း
ဒေလီမှာ မျောက်တွေ ပေါပါသည်။ ဒေါင်းတွေလည်း နေရာတကာမှာ တွေ့ရသည်။ လင်းတတွေကလည်း များလွန်းလှသည်။ ဆန္ဒပြသူတွေ သူတို့ပြတဲ့ သံရုံးခေါင်မိုးမှာ လင်းတ တအုပ် နားနေတာတွေ့လို့ ကျေနပ်အားရပြီး၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြ၊ အတိတ်-နိမိတ် ကောက်ကြဘူးပါသည်။ နွားတွေ ကျွဲတွေဆိုတာ တချို့နိုင်ငံက လူတွေထက် အလွတ်လပ်ကြီး လွတ်လပ်ကြပါသည်။
တနေ့က လူနာတဦး မျောက်ကိုက်ခံရလို့ အစိုးရဆေးရုံသွားပြတော့ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး အထိုးခိုင်းတယ်လို့ ပြောပြီး ဆေးခန်းကို အနာလာပြ၊ မေးမြန်း-ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဆေးခန်းမှာ အလုပ်ကူ-ပညာယူနေကြတဲ့ (ဗော်လန်တီရာ) ဆရာမများ အံ့သြနေကြသည်။
“ဟုတ်တယ် ခွေးရူးရောဂါဆိုတာ ခွေးသာမက တခြား တိရစ္ဆာန်တွေကနေလည်း ကူးနိုင်တယ်။” တိရစ္ဆာန်တွေဆိုတာ Domestic အိမ်မွေးရော Wild တောနေပါ အကောင်မှန်သမျှကနေ ကူးနိုင်တယ်။ တခါက မူကြိုတန်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသူလေးတယောက် ကျောင်းမှာ domestic animals, wild animals ဆိုတာတွေ သင်ရတယ်။ တနေ့မှာ သူ့ကို ဧည့်သည် ကြိုဘို့ လေဆိပ်သွားတော့ ခေါ်သွားတယ်။ အပြင်ဗဟုသုတလည်း ရအောင်ပေါ့။ “သမီး ဒါက domestic airport လို့ ခေါ်တယ်။ မှတ်ထား။။” ဒီတော့ ကလေးမက “ဒါဆိုရင် wild airport က ဘယ်မှာလည်း” တဲ့။
ခွေးအပြင် လင်းနို့၊ မျောက်၊ ကြောင်၊ မြေခွေး၊ ၀ံပုလွေ၊ ရက်ကွန်း-၀ံ၊ နံစော်-ဖျံ၊ ကိုင်အုတ်-၀ံပုလွေ၊ မြွေပါ၊ အသားစား-ဖျံ၊ ၀က်ဝံ စတဲ့ အကောင်တွေကနေလည်း ခွေးရူးရောဂါ ရစေနိုင်တယ်။ လူ့သွားရည်ကလည်း ခွေးရူးကူးနိုင်သေးတယ်။ ကိုက်တဲ့သွားက အသားထဲ နစ်ဝင် မသွားတောင်မှ သွားရည် အ၀င်ခံရရင် ကူးနိုင်တယ်။
Rabies ဆိုတဲ့ စကားက (လက်တင်) ရော (သင်္သကရိုက်) ဘာသာကပါ လာတာ။ နေရာတကာမှာ ရှေးကတည်းက ရှိတဲ့သဘော ဆောင်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ တနှစ် လူ ၅၅၀၀၀ ခွေးရူးကြောင့် သေနေရတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အဆိုးတွေ စုနေတာ အာဖရိက နဲ့ အာရှ။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု နဲ့ ပညာ-အသိနည်းပါးမှု။ ရောဂါဆိုးတွေ နဲ့ စနစ်ဆိုးတွေ။
ရောဂါရှိတဲ့ အကောင်ရဲ့ တံတွေးထဲမှာ ပါနေတဲ့ (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုးက အကိုက်ခံရသူရဲ့ အာရုံကြောကတဆင့် ဗဟို အာရုံကြောစနစ်ကို ရောက်လာတာနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြလာတယ်။ အဲဒီအဆင့် ရောက်ရင် အခုထိတော့ ကုမရနိုင်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကောင်ကိုက်ခံရတာနဲ့ ကာကွယ်ဆေးကိုသာ အားကိုးနိုင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေ အိမ်မှာ မွေးရင် ပုံမှန် ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးပေးပါ။
ခွေးရူးကို Hydrophobia လို့လဲ လူသိများတယ်။ “ရေကြောက်” ရောဂါပေါ့။ Chickenpox “ရေကျောက်” ဆိုတာက တမျိုးပါ။ ရေကို ကြောက်တယ် ဆိုတာက ရေကို မကြိုက်တာ၊ မုန်းတာ မဟုတ်ဘူး။ ရေကို တအားသောက်ချင်ရှာလွန်းလို့ ရေမြင်တာနဲ့ မြိုချဘို့ ပြင်လိုက်ရင် အာခေါင်နဲ့ လည်ချောင်းမှာ အတင်း မခံမရပ်နိုင် နာကျင်တာ ခံစားလာရတာကို ပြောတာပါ။ ရေမြင်ရင် တက်ချင် လာမယ်။
တချိန်တုံးက မြို့နယ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဆေးရုံကို ရောက်လာတယ်။ ဆေးရုံနဲ့ သူတို့ အိမ်ကလည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်။ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးက စိတ်သဘောကောင်းလို့ လူချစ်လူခင် များတယ်။ “ဆရာ ကျွန်တော့် ဇနီ့း့ ခြံထဲ လျောက်ပြီး၊ အပင်တွေ ကိုင်ပုံရပါတယ်၊ တကိုယ်လုံး ယားနေတယ်”။ ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ဇနီးဟာ သူတို့ သားသမီးတွေအပြင် တိရစ္ဆာန်တွေကိုလဲ ချစ်တာ ကျွန်တော် သိတယ်။ လူနာကို အကဲခတ်ကြည့်တယ်။ အင်ပြင် ခေါ်တဲ့ (အလာဂျီ) ရလို့ ယားတာမျိုး မတွေ့ရပါ။ ရေ အသောက်ခိုင်းကြည့်တော့ သိပါပြီ။ လူကြီး၊ မိတ်ဆွေကြီး တဦးရဲ့ဇနီး ဖြစ်နေတာမို့ ပိုသေခြာအောင် ခရိုင်ဆေးရုံကြီး ပို့လွှတ်ပြီး၊ သမားတော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ယူစေရတယ်။ သမားတော်ကလည်း ကျွန်တော့် ထင်မြင်ချက်ကို အတည်ပြုပေးတယ်။ လူနာကို ပြန်ခေါ်လာပြီး၊ တတ်စွမ်းသ၍ ကုသပြုစုမှုတွေကို ဗိုလ်မှူးကတော်ရဲ့ နောက်ဆုံး ရက်တွေမှာ အစွမ်းကုန် လုပ်ပေးကြရပါတယ်။
ယားယံတာကို ခွေးရုးရောဂါ လက္ခဏာတွေထဲမှာ တချို့က ထည့်တာ မတွေ့ရပါ။ ရောဂါအကြောင်း စုံအောင် ရေးတာထက် ကာကွယ်မှုက ပိုအကျိုးရှိမယ် ထင်တယ်။ ခွေးကိုက်ခံရရင် ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး၊ ကျကျနန ဆေးပါ။ ကိုက်တဲ့ ခွေးကို ၇ ရက် တိတိ စောင့်ကြည့်ပါ။ ခွေးကို စိတ်ဆိုးပြီး သတ်မပြစ်သင့်ပါ။ တပါတ်ကြာလို့ ခွေးက သေသွားတယ်ဆိုရင် သေခြာပြီ ခွေးရုး။ မသေခြာရင် ကံတရား သိပ်အားကိုး မနေပါနဲ့၊ Risk မယူပါနဲ့။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပါ။ တနှစ်မှာ လူပေါင်း ၁၀ သန်းမက ကာကွယ်ဆေး ထိုးနေကြရတယ်။ အရင်က ချက်တ၀ှိုက်မှာ ၁၄ ခါ ထိုးရတာ။ နာမှ နာ။ ထိုးပေးရသူကပါ အားနာရတယ်။ အခုပေါ် ဆေးတွေက အဲလောက် မကြာ၊ အဲလောက် မနာတော့ပါ။ အမျိုးအစား ၂ မျိုး ရှိတယ်။ Nerve tissue vaccine နဲ့ Cell culture vaccine တွေပါ။ ပဌမအမျိုးက ဈေးချိုတယ်။ ဈေးချိုတော့ အကောင်း နည်းတာပေါ့။ အခု စာရေးချိန်ကာလ အိန္ဒိယမှာ ၅ ခါထိုးရမဲ့ ARV ဆေးကိုသာ ဆိုင်တင်ခိုင်းတယ်။ ၁ လုံးကို ၃၇၀ ရူးပီး ဈေးနှုံးလို့ ရိုက်ထားတယ်။ ၀ယ်တတ်ရင် ၃၂၀ ဒါမှ မဟုတ် ဒီထက် ဈေးလျော့မယ်။
တိရစ္ဆာန်မှန်သမျှ အကိုက်ခံရရင် အနာကို ဘယ်လောက် ပြဲထွက်နေနေ ချုပ်မပေးရပါ။ သက်ရှိ တကောင်ကောင်ရဲ့ သွားရည်ဟာ အကိုက်ခံရသူ သွေးထဲဝင်ရင် မတည့်ပါ။ အနာကို ပိုးသန့်အောင်လုပ်၊ အသားနု ကောင်းကောင်း တက်လာအောင် စောင့်ပြီး၊ နောက်မှာ အနာရွတ် သေးချင်ရင် အနာသစ်လုပ်ပြီးမှ လှလှလေး ပြန်ချုပ်ပေးရပါတယ်။
လူကိုက်ခံရရင်လဲ အဲလိုဘဲ။ နယ်တခုမှာ တာဝန်ကျတုံးက လူနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ တယောက်က ကိုက်လိုက်လို့ တယောက်မှာ နှာခေါင်းပြတ်သွားတယ်။ နှာခေါင်းပေါက်ကို ဖုံးထားတဲ့ ညာဘက်က ခုံးခုံးလေးနေတဲ့ နေရာ ပါသွားတယ်။ ခန္ဓာဗေဒမှာ Ala Nasi လို့ ခေါ်တဲ့နေရာပေါ့။ အနာကျက်တော့လဲ ရုပ်ဆိုးနေတာပေါ့။ ယောက်ျားလေး၊ ခပ်ရွယ်ရွယ် ရှိသေးတာ။
(ဂျန်ဂယ်လ်-ဆရာဝန်) ဆင်ကြံကြံပါတော့တယ်။ အရေပြား အစားထိုးယုံနဲ့ မရနိုင်။ အရိုးနု ပါရမယ်။ ခပ်ခုံခုံးလည်း ဖြစ်ရမယ်။ စားလဲ ဒီစိတ်။ သွားလဲ ဒီစိတ်။ ဆရာဝန်မှာ ငယ်ငယ်က ဆရာကတော်ကို ရည်းစားထားခဲ့တုံးကလိုမျိုး ဖြစ်နေရှာတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ လူနာရဲ့ နားရွက် တနေရာကို ပုံကျအောင် လှီးဖြတ်ယူပြီး၊ ပြတ်သွားတဲ့ နှာခေါင်းထိပ်မှာ အစားထိုး ချုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တနှစ်မှာ ကျွန်တော့်လူနာ မိန်းမရသွားပါတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 10:21 PM
Age determination ၁၈ နှစ်ပြည့်ရင် လူရာဝင်
Peptic ulcer လေနာ ဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်း ဖြစ်သည်
Sweating (Perspiration) ချွေးထွက်ခြင်း
Lungs and Kidneys အထူ နဲ့ အပါး
Research and Experience တိတိကျကျ သုတေသန နှင့် အနှစ...
Weight gain လှယုံမက ၀ချင်သေးရင်
Clotho (ကလိုသို) နတ်သမီး သို့မဟုတ် ဇာတာထဲကအတိုင်း ...
Is it safe to live as before during pregnancy? ကို...
Trans fats အညာသားများ ဆီစားကြသည်